MASHRUUCA HORUMARINTA XOOLAHA NOOL – Vote Cirro – Presidential Election 2017 Somaliland
„Inagoo isku duuban waxaynu kor uqaadi doonaa dhoofka xoolaha nool 25% shanta sanno ee soo socda, wax soo saarka guudna GDP $45 million. Sido kale waxaynu ku dadaali doona inaynu hirgalino suuqyo cusub.“
Ujeedada xisbiga waddani ka leeyahay horumarinta dhaqaalaha somaliland waa inuu abuuro barnaamijka horumarinta xoolaha nool si loo kordhiyo dhoofka xool 50% (25% shanta sanno ee ugu horeeya, 25% shanta sanno eek u xigta). Xukuumada waddani waxay taageero mug leh u fidinaysa kaabayaasha muhiimka u ah xoolaha sida biyaha iyo baadka gaar ahaan dhul daaqsimeedka ku haboon xoolaha. Sidoo kale waddani wuxuu kobcinaya maamuulka iyo awooda wasaarada xoolaha nool si caafimaadka xooluhu unoqdo mid fiican isla markaana ka hortagaya in cuna qabatayn la saaro xoolaheena iyadoo lagu sababaynayo caafimaad la,aan.
Habka loo marayo
Si looga midha dhaliyo mashruuca horumarinta xoolaha nool marka hore waxaa la sahamin doonaa dhamaan dhulka somaliland iyadoo muhiimada la siinayo dhulka ku haboon beeraha iyo baadka. islamarkaana isu socodku fudud yahay, taasoo sahleysa in si dhib yar lagu soo gaadhsiiyo lagana dhiso ceel biyood lagu kaydiyo biyaha badda laga soo sifeeyo. Ceelashaas waxaa laga waraabin doonaa xoolaha iyo beeraha. Ceel kasta waxaa lagu xidhi doonaa mashiinada biyaha oo ku shaqaynaya tamarta la cusboonaysiiyo sida qoraxda ama dabaysha. Kadibna waxaa laga talaalayaa dhuumo biyaha geeya beeraha ku hareeraysan si loo beero cunto iyo baad ku filan dadka deegaanka loogana waraabiyo xoolaha. Sidoo kale waxaa ceelashan laga sii samayn karaa habka loo yaqaano aquabonicska taasoo suurta galinaysa in cunto dheeraad laga abuuro.
Qorshaha xisbiga waddani waa inaan hirgelino ugu yaraan 5 ceel, midkiiba qaadi kara 10 milyan oo litir. Islamarkaana la dhaaminayo xiliyada aanay jirin baahi biyo si hadhow diyaar loogu ahaado abaaraha ama baahi biyo la,aan.
Kharashka qodista ceelasha 300 $/ccm
Mugga 1 kii ceel 10.000 ccm
1 kii ceel 3 million $
5 ceel 15 million $
5 Diesel powered water pumps (10.000 liter/h): 4.000 $
Talaalida dhuumaha/ pipe works 500.000 $
Kharashka guud 15.5 million $
Habka loo marayo mashruucan
Sahaminta dhulka ugu haboon beeraha iyo daaqa
U kuurgelida dhulka iyado la eegayo isu socodka iyo dalaga laga beeri karo
Diyaariinta mashruuca ceelasha iyadoo la eegayo mid kasta habka ugu fiican ee loo isticmaali karo (waraabka xoolaha ama beeraha)
Qodista ceelasha iyo dhigida dhuumaha qeybinaya biyaha
Dhaaminta ceelasha xiliyada roobabka
Saamaynta iyo faaiidada mashruuca horumarinta xoolaha
Maadaama xoolaha nool ay yihiiin lab dhabarta dhaqaale ee somaliland iyo ilaha dakhli ee ugu weyn bulshada iyo xukuumadaba. Dhoofka xoolaha nooli waa 60% wax soo saarka guud ee somaliland (GDP), dakhliga bulshada somaliland 80% wuxuu si dadban ugu tiirsan yahay xoolaha nool.
Saamaynta mashruucani waa mid aad u wax tar badan, waxaana ugu muhiimsan:
Kor ukac shaqo abuur balaadhan isla markaana hirgalinaysa inay furmaan suuqyo iyo ganacsiyo cusub sida warshado hilib iwm.
Kor ukac balaadhan oo ku yimaada dakhliga qoysaska iyo xukuumadaba taaso dhalinaysa korodh maalgashi oo ku yimaada dhaqaalaha somaliland.
50% kor ukac ku yimaada dhoofka xoolaha nool waxay keenaysa dakhli dhan 90 milyan oo dollar. (tixraaci miisaaniyada dawlada dhexe somaliland 2016)
Dhamaan marka la fuliyo mashruucan, somaliland waxay talaabo hore ugu qaadeysaa inay higsato isku filnaansho cunto, dabar goynta faqriga iyo ilaalinta deegaanka (food security, zero hunger and life on-land) islamarkaana ka mid noqoto waddamada aduunka ee isku taxalujinaya inay hirgeliyaan barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay (sustainable development goals)